Konke mayelana neFasoracetam
I-1. Umlando nomsuka weFasoracetam
I-3. Izinzuzo ezithakazelisayo zeFasoracetam
I-4. Isilinganiso Esiphakanyisiwe seFasoracetam
I-5. Imiphumela emibi evamile yeFasoracetam
I-6. Ukubuyekeza komsebenzisi kanye nokuhlangenwe nakho kokusebenzisa i-Fasoracetam
I-7. Uphi futhi Ungawuthola kuphi i-Fasoracetam
I-Nootropics ingenye yezindlela ezivelayo namuhla ngeFasoracetam ehola phambili. Ngenye yezokwelapha ezidume kakhulu emakethe ukuthi abantu abaningi bakhetha ukusebenzisa ukuthuthukisa ukusebenza kwabo kokuzicabangela. Uzovuma ukuthi ngenkathi wenza ibhizinisi lakho lasuku zonke, udinga okungaphezu kokudla kuphela. Ngezinye izikhathi, ungase utholakale esimweni lapho kungakhathaliseki ukuthi uzama kangakanani ukudla okuhlanzekile, ukuzivocavocavoca, ukulala kahle, usenenkinga yokuzama ukuhlala ugxile futhi ugqugquzelwe.
Ngaphezu kwalokho, kuleli zwe esikufunda izinto ezintsha nsuku zonke, ubuchopho bakho bungase buqede ngokweqile uze uqale ukulahlekelwa ukuhlushwa. Ukuntula ukulala ngokwanele nokuphumula kungenza kube nzima nakakhulu ukuhlala uqaphile ngokwengqondo sonke isikhathi kungase kube khona okungenakwenzeka .Ngaleso sikhathi uyabona ukuthi udinga ukwesekwa okungakwandisa umsebenzi wakho wengqondo ngaphandle kokuthinta impilo yakho. Akumangazi ukuthi ochwepheshe beze nalezi zidakamizwa ukubhekana nokukhubazeka kwengqondo kubantu. Akuzona nje kuphela abazisiza ekuqhubekeleni phambili kodwa futhi badlala indima ebalulekile ekusizeni umuntu afunde kabanzi.
Ukuthatha I-Fasoracetam enye yezindlela ezingakusiza amandla ngosuku ngalokhu ngokuqinisekisa ukuthi unamandla anele kanye nokuphila okudingayo.
1. Umlando nomsuka weFasoracetam
Eyaziwa nangokuthi i-NFC-1, i-LAM-105, ne-NS-105, i-Fasoracetam (110958-19-5) selokhu ikhona kusukela ekuqaleni kwe-1990s. Ihlukaniswa njengenye yemindeni ye-racetam yezidakamizwa futhi yaqala ukuthuthukiswa nguNippon Shinyaku, inkampani yaseJapane yeMithi ehlose ukuza nomuthi wokwehla kwesifo senhliziyo. Le nkampani isetshenziswe ngaphezu kwezingu-$ 200 million ukucwaninga mayelana nomuthi nakuba ihlulekile esigabeni 3 ngoba ayiphumelelanga.
Ngemuva kokushiya kwayo, isithakazelo ekusizeni sabuyiselwa ku-2013 yinkampani okuthiwa i-Neurofix ngemuva kokuthenga idatha ye-Fasoracetam emtholampilo kusuka kuNippon Shinyaku. Umuthi we-Aevi Genomic wathola i-Neurofix futhi waqala ukwenza ukuvivinywa kokwelashwa kwabaselula ababhekana nokukhathazeka, i-autism, i-ADHD kanye nalabo abanikazi babo be-glutamate receptor gene.
Ku-2015, uhlelo lwe-US Food and Drug Administration lwe-Investigational New Drug Program lwavumela abathuthukisi beFasoracetam ukuba baqale ukuqhuba izilingo zabo kubantu futhi baphinde bahambise umuthi kuwo wonke imigqa yombuso. Njengamanje, i-Fasoracetam isesigaba 2 sezilingo zomtholampilo lapho abacwaningi bephenya khona uma le mithi iyasiza ekwelapheni kwe-autism spectrum disorder.
Njengazo zonke izinhlanga emakethe, namanje aziqondi kahle ukuthi uFasoracetam usebenza kanjani. Noma kunjalo, ucwaningo lwenziwe lukhombisa ukuthi lusebenza ngalezi zindlela;
Yandisa ama-receptors atholakalayo ku-cortex ye-gamma-aminobutyric acid engummemezeli wokuvimbela. I-Fasoracetam iyashintsha umsebenzi we-GABA-B owamukelayo ngaleyo ndlela yandisa inani le-GABA etholakalayo kuzo zombili uhlelo lwezinzwa kanye nobuchopho.
Futhi, i-glutamate yi-pre-precursor GABA futhi iyimfuneko ye-neurotransmitter engavimbelayo eyenza ukuthuthukisa ukufunda, ukunciphisa ukukhathazeka, ukugqugquzela ukulala, kanye nokulimala.
Ukwandisa inani le-acetylcholine ekhishwe ku-cortex ye-cerebral. I-Acetylcholine yi-neurotransmitter etholakala ku-thebrain futhi umthwalo wayo ukuthuthukisa inkumbulo, ukufunda nokuqonda konke. I-fosoracetam iphinde ibe yindlela yokugcoba ngokwandisa ukutholakala kwe-choline ku-hippocampus ne-cortex. I-Choline ingumsoco odlala indima ebalulekile ekwakheni i-acetylcholine kuwo wonke ubuchopho.
Isenzo se-cholinergic asikwenzeka kuphela nge-Fasoracetam, kodwa futhi kwenzeka nge-aniracetam, i-piracetam nazo zonke ezinye i-nootropics ezitholakala emndenini we-racetam. Bonke bayaziwa ngokwenza ngcono okukhulu kuzo zonke izici zokuqashelwa. Ngezinye izikhathi kungase kube nesidingo esikhulu se-choline emzimbeni kuze kube yilapho sekutholwa khona. Ngenxa yalokho, kungaholela esimweni esincane, ubuchopho nobuchopho. Ukuze ubhekane nale mphumela, ungathatha u-supplemental choline.
Enye indlela Umsebenzi we-Fasoracetam ngokusebenzisa ezinye izinhlobo ze-glutamate receptors ezibizwa ngokuthi i-metabotropic glutamate receptors (mGluRs). I-mGluRs yenza imisebenzi ehlukahlukene ebuchosheni kuhlanganise nokuthuthukisa ukufunda nokukhumbula kanye nokubhekana nokukhathazeka. Wonke ama-mGluRs aziwayo ayisishiyagalombili asebenza ngezandla ekulondolozeni ibhalansi kanye nawo amabili akhulisa ukukhungatheka kwe-neural. Ezinye i-MGluRs eziyisithupha zisiza ekunciphiseni ingozi ye-neurotoxicity ngokunciphisa ukuxolisa kwe-neural. I-Glutamate ibalulekile emzimbeni ngoba i-neurotransmitter ebaluleke kakhulu ye-excitatory.
Uma kunokungalingani kwe-glutamate emzimbeni, umuntu angase ahlupheke ngenxa yezifo ezihlukahlukene ezingokwengqondo nezingokomzimba kubandakanya; isithuthwane, i-schizophrenia, i-ADHD, i-disorder disorder kanye nezifo ze-neurodegenerative, isib. isifo se-Alzheimer.
Ezicwaningweni ezenziwe ezilwaneni, i-Fasoracetam ibuyiselwe ngokuphumelelayo umsebenzi weMGluRs emibili evimbela ngakho kuholela ekunciphiseni umsebenzi we-glutamate ebuchosheni. Kwezinye izimo, i-Fasoracetam ingakwazi ukulawula wonke ama-receptors we-metabotropic receptors okuholela ekubuyiseleni ibhalansi kuhlelo lonke le-glutamate. Yingakho i-Fasoracetam iye yaba yinzuzo kunoma ubani onesifo se-ADHD, isimo esihambisana namazinga aphansi okuthiwa i-glutamate ngaphandle kokusebenza nje njengesisusa.
Ngakho-ke, singasho ukuthi iFasoracetam isebenza ematokweni amathathu okukhomba ukunikeza imiphumela efanayo. Into yokuqala eyenzayo ukuthi isebenza kwi-neurotransmitter ye-choline ngakho-ke ikhuthaza umsebenzi wayo wokutholwa. Okwesibili kuvuselela ukwanda kwenani le-GABA receptors, futhi ekugcineni, lishintsha ama-glutamate receptors kanye. Zonke lezi zenzo ziholela ekuthuthukiseni ikhono lokuqonda labasebenzisi beFasoracetam.
3. Izinzuzo ezithakazelisayo zeFasoracetam
Ngokusekelwe ezifundweni ezihlukahlukene ezenziwa esigabeni 1 kanye nesigaba 11 socwaningo lwezokwelapha eFasoracetam iningi lezinzuzo zalo lihle. Ake sibuke ngokwengeziwe izinzuzo eziletha etafuleni.
Umshwalense oyinhloko ku-ADHD
Namuhla, i-ADHD ingenye yezimo ezivame kakhulu abantu abadala ababhekana nazo. Lokhu kungenxa yokuthi iningi labantu lithatha imisebenzi eminingi ngesikhathi esifanayo okuholela ekunciphiseni isikhathi sabo sokunakwa. I-fasoracetam isetshenziswa njengesiguli esikhulu semithi eminingi ye-ADHD. Isebenza ngokuphumelelayo futhi ngokushesha ukuze kunqunywe izimpawu. Konke Okumele Ukwazi Ngaphambi Kokuthenga ama-SARM
Uma kukhona ushintsho ekugxilweni kwe-GABA, futhi kukhona ukuguqulwa kwama-receptors, omunye angase ahlupheke imizwa yokucindezeleka. Lokhu kungenxa yokuthi ngaphandle kokunciphisa injabulo enkulu; ibuye ilawula i-neurogenesis nokuvuthwa kwe-neural. Ukucindezeleka kunciphisa ukuzalwa kwe-neurons elisha elibhekene nomthethonqubo wokuqaphela kanye nemizwelo. Uma i-neurogenisis iqhutshwa, uhlelo lwe-GABA lusiza ukulawula imizwa.
Ikhuthaza izinga lokugxila nokugqugquzela
Ukuthatha i-Fasoracetam njalo kungakhuphula ukugxila kwakho. Lokhu kubangela ukungabi namandla okungabangela ukuphelelwa ithemba nokucindezeleka. I-Fasoracetam ikhuthaza ukutholakala kwe-choline okusiza ekuthuthukiseni ukugxila kwengqondo nokuhlushwa. I-Choline yaziwa ngokusiza ekugcineni ubuqotho bezakhi, i-neurotransmission nokukhiqizwa kwe-homocysteine.
Ngaphezu kwalokho, i-choline iqhutshwa phambili ekwenzeni i-acetylcholine esheshayo igxilwe yi-nerve endings ukusiza ukuhambisa imiyalezo ye-neural. I-Acetylcholine ithuthukisa ukukhishwa kwezimpendulo okusho ukuthi kuthuthukisa ukuqapha futhi kusiza ekugcineni ukunakekelwa.
Ukwandisa Amakhono Okufunda
Umehluko phakathi kwabafundi abaphezulu kanye nokuphuza amakhono amakhono okuqonda okubafundi abahle. Uma amakhono omuntu okuqonda angcono, ukufunda ngoba kulula futhi okusheshayo. Uma usebenzisa i-Fasoracetam, amakhono akho okungaqondakali aqiniswe, futhi amandla akho engqondo aqiniswa. Iqhubekela phambili ngokufaka ikhodi ecacile yolwazi olusha ngokusebenzisa ukuhlinzekwa okunamandla kokwenza umsebenzi we-neuronal.
I-Fasoracetam isebenza ekwandiseni amazinga we-choline ebuchosheni okusiza ukuvimbela ukwehla kwenethiwekhi ye-dendritic. Ibuye ihlinzekele ngokushesha umzimba we-cerebral metabolism. Ukusetshenziswa kweFasoracetam kuhlotshaniswa nokuqiniswa okukhulu kwamandla ikakhulukazi uma kuthathwe ukwelashwa.
Unempahla enamandla ye-Anxiolytic
Ukukhathazeka kuyazuzisa njengoba kulungisa ingqondo yomncintiswano ikakhulukazi uma kusezingeni layo lokuphila. Nokho, uma amazinga ehlangothini oluphakeme, kungenzeka ukuthi liphazamise ukusebenza komqondo. Ukukhathazeka kubangela ukungabaza, ukungakwazi ukwenza isinqumo futhi kwenza kube nzima ukucabanga. Ukulwa nokunciphisa ukukhathazeka kungumsebenzi wokuphila konke okungahle kukudinge ukuba uhlele kabusha izinsuku zakho ukuvimbela ukuzikhazamisa okubangela ukukhathazeka nokwesaba.
Ukukhathazeka kubangelwa izinkinga ze-neurotransmitter nezinkinga zokucabanga njengoba izaziso ze-nootropics ziyaziwa ngokusiza ngendlela ephawulekayo. Enye ye-nootropic enjalo yi-Fasoracetam engumgqugquzeli wokuqonda kanye ne-agentololytic agent esiza ukwenza i-GABA eyengeziwe itholakale ebuchosheni ukulwa nanoma yimuphi umsebenzi owenzayo wokuzijabulisa. Lezi zenzo zakha ukushelela okushelelayo, okuzethembayo kanye nokwandisa isisusa sokuba ngaphezulu komphakathi.
Yize amanye ama-pharmacy amaningi angasebenzisa imisebenzi efanayo, i-Fasoracetam iyindlela engcono kakhulu. Isizathu salokhu ngoba sisebenza ekunciphiseni i-anxiolytics uma isetshenziselwa isikhathi eside. Labo sebenzisa i-Fasoracetam bangavuma ukuthi akubanga imbangela yokulutha kodwa kuyabangela ukukhululeka ngokubekezela okungenayo ukuthembela. Uma i-GABA ne-glutaminergic indlela elinganiselayo, khona-ke amathuba okubamba ngokweqile nokudambisa kuncipha.
Kungavimbela ukulahlekelwa kwememori
Ukubhekana nokulahlekelwa kwememori kuyinkimbinkimbi ikakhulukazi uma ungakwazi ngisho nokukhumbula izinto ezijwayelekile noma abantu. Ungase uzizwe sengathi ukuzethemba kwakho, isithunzi nokuzimela kwakho kuncipha ukuthi uzizwe ungenalutho. I-Fasoracetam iyaziwa ukusiza umuntu ahlale ebukhali ngokwengqondo nokulahlekelwa kwememori ephansi.
Ucwaningo olwenziwe ngamagundane, i-Fasoracetam yafakazela ukuvimbela izinkinga zememori ezabangelwa yi-baclofen, umsunguli we-GABA-B. Kwabikwa ukuthi kunciphisa amnesia ngokukhulisa amazinga e-acetylcholine nangokunciphisa imiphumela ebangelwa ukusebenza kweGABA-B.
Uma kwenzeka ufuna ukuhlala ushukunyiswa ngenkathi wenza imisebenzi yakho yansuku zonke, kufanele uthole ukuthuthukiswa kwengqondo. Namuhla, izidakamizwa eziningi zithembisa ukusiza umuntu ukuba afinyelele lokho kodwa okumbalwa kakhulu ukuletha. Izixazululo ze-Nootropic azigcini nje kuphela kodwa zinikeza imiphumela emangalisayo ikakhulukazi ekuthuthukiseni ukusebenza. Ukuthuthukiswa kwamakhono okuqonda kuwukuthi awukwazi ukuhloselela kuphela kangcono kodwa futhi ube nombono nombono obanzi.
Izivivinyo ezenziwe ezilwaneni zibonisa ukuthi emva kokuphathwa kwalesi sidakamizwa, ziba ngcono ngokwengeziwe. Manje sebekwazi ukusingatha okungaphezu kwalokho abakwaziyo ngaphambi kokuthatha isengezo. Okufanayo kwenzeka kumuntu. Umuntu angagxila kakhulu ekufezeni imigomo nemithwalo yemfanelo. Ukwenyuka kwamazinga okugqugquzela kusiza umuntu ukuba abhekane nokuphila ngendlela engcono futhi ephumelelayo engayenza ngaphambili.
Le i-nootropic yenza umsebenzi omuhle njengento evuselelayo ngoba ingasiza ekwenzeni kabusha ubuchopho bakho ngakho-ke ukugcina kuvuselelwe isikhathi eside. Ukubuyekezwa kwe-Fasoracetam, ungatshela ukuthi abantu abaningi bathanda umuzwa oqabulayo owenzayo.
4. Isilinganiso Esiphakanyisiwe seFasoracetam
(1) Ulwazi lwesilinganiso
Esivivinyweni somtholampilo esenziwe kubaguli be-ADHD, izilinganiso ze-100, i-200 ne-400 mg zenziwa ngomlomo. Ngokweqile, abasebenzisi abaningi babike ukuthi u-Fasoracetam uphumelele kumthamo phakathi kwe-100-800mg nsuku zonke. I-fasoracetam nayo ingathathwa ngokuzenzekelayo, okusho ukuthi ungayifaka ngaphansi kolimi nge-range range phakathi kuka-5-15mg nsuku zonke.
Ukuze uthole isilinganiso esiphezulu se-Fasoracetam esingeke sikubeke emiphumeleni emibi, ungathatha ama-100mgs ngosuku. Uma sekuyisikhathi sokuqala ukuthatha i-Fasoracetam, ungakhetha i-dose encane ephumelelayo. Okunconywayo yi-10-15mg ngomthamo ngamunye okuthatha okungenani amanani amathathu ngosuku. Ingezela ku-30-50mg umthamo ngosuku. Uma usuhlolile ukuthi umzimba wakho ungakubekezelela yini izidakamizwa, ungakwazi ukwandisa umthamo wakho. Ukudlula ngokweqile kungabangela isicanucanu nokuhlanza, ngakho kufanele uqaphele ukungathathi okuningi.
Isikhathi esihle sokuthatha i-Fasoracetam ekuseni ngaphambi kokuthatha ukudla. Iningi Ukubuyekezwa kwe-Faracetam bathi ngaleso sikhathi unikeza impumelelo engcono yokuvuselela. Ukuyithatha ngaphambi kokulala kungabangela nezinkinga zokuzama ukuthola ubuthongo.
I-Fasotaretam iphephile lapho kuthathwa abancane nabancane. Kodwa-ke, kuthatha isikhathi eside kakhulu kubantu abadala ukuze basuse isidakamizwa kusuka ohlelweni lwabo. Bangaphinde bafinyelele emazingeni aphezulu egazi ngenkathi kulesisindo esincane se-Fasoracetam kuqhathaniswa nabancane.
Isizathu salokhu le-nootropic inezilinganiso ezivamile ngenxa yesikhashana se-Fasoracetam yokuphila okusho ukuthi iqedwa ngokushesha emzimbeni.
(2) Ukubeka phansi
Kuhle ukuthatha i-Fasoracetam yedwa, kodwa abanye abantu bangase bakhethe ukuyibeka. Ngenkathi ubeka phansi, uthatha i-Fasoracetam ndawonye nezinye ama-nootropics. Ngenxa yalokho, ungakwazi ukususa umphumela ongcono ngokwengeziwe ekusebenzeni ngobuchopho kusuka emgodini weFasoracetam.
I-Fasoracetam, i-Coluracetam Stack
Le stack ingenye yezigqoko ezinamandla kakhulu ngenxa yezizathu ezithile. Uma usubhanqa izithako ezimbili, kunokwanda okukhulu kwe-acetylcholine ebuchosheni ngakho-ke ukunikeza umsebenzisi umuzwa omuhle. I-Fasoracetam iba yi-best antagonist ye-GABA-B, izokwenza ngcono kakhulu ekugxilweni kwakho ngenkathi ngesikhathi esifanayo i-coluracetam izokhulisa isimo sakho sengqondo.
I-coluracetam, isitaki se-Fasoracetam kuthiwa kusiza ezinkingeni ze-neurological, ukuthuthukiswa kwemizwelo, nokuhlushwa. Uma ufuna i-stack ezokugcina igxilile futhi ilinganise, khona-ke kufanele ucabange ukuthatha le stack.
Umthamo wayo uhilela; I-15mg Fasoracetam (110958-19-5) ne-10mg Coluracetam ethathwe kanye noma kabili ngosuku.
I-Noopept, i-Fasoracetam, i-Choline Stack
Uma konke okuhloswe kwakho kugxila ekugxileni, yilokho okuyiyona ndlela engcono kakhulu yeFasoracetam yalokho. Kokubili i-Fasoracetam (110958-19-5) no-Noopept bakhuliswa yi-choline ukuze banike amandla.
Inzuzo ezayo ngokuthatha lesi sikhwama ukuthi iyasiza ngokugxila kwengqondo futhi ukwandise ukuqwashisa okungokwemvelo ngaphandle kokushiya uzizwe ujitteri. Ukuze uthole isitoreji esizokugcina ugxile kulo lonke usuku, lokhu kuyindlela engcono kakhulu.
(3) Isikhathi somphumela weFasoracetam
Cishe uzothola umphumela we-Fasoracetam wokwelashwa ngemuva kokusebenzisa kwawo imizuzu engamashumi amathathu. Uma kuthathwe ngokulinganisa, inomphumela ngokushesha, futhi ungazizwa umphumela we-Fasoracetam ngemizuzu eyishumi nje. Umphumela ungakugcina kuze kube amahora angu-8. I-fasoracetam isigamu-impilo ijikeleze amahora amabili noma amathathu futhi iyaqhubeka iqoqa emzimbeni ngokusetshenziswa njalo.
(4) Ukusebenzisana kwezidakamizwa
Azikho izidakamizwa eziningi ezingathinta ukusebenza kwe-Fasoracetam. Isidakamizwa kuphela esingase sisebenzisane nayo yi-phenibut, isakhi esisebenza ngokusebenzisa i-GABA receptors. Kuvame ukusetshenziselwa ukuthuthukisa umsebenzi wokuqonda nokunciphisa ukukhathazeka.
I-fasoracetam ikwandisa impendulo ye-phenibut ngokukhulisa inani lama-receptors le-GABA-B nokunciphisa ukubekezelelana ku-phenibut. Uma uthola ukuthi unezinkinga zezokwelapha noma ungaphansi kwemithi enqunyiwe, kufanele ucabange ngokukhuluma nodokotela wakho kuqala ngaphambi kokuthatha i-Fasoracetam.
Abesifazane abakhulelwe bayalulekwa ukuba bahlale kude nomuthi. Ubulili abucaci ukuthi ungathatha lokhu okungeziwe yini; kodwa isisindo singase sibe isici esinqunyiwe.
5. Imiphumela emibi evamile yeFasoracetam
Kuyinto evamile ukuthi ngazo zonke izinto ezingenakusiza kuyoba nomthelela ohlangothini. Lezi zidakamizwa ziyaziwa ukuthi ziphephile, futhi ngeke zivame ukubhekana nemiphumela emibi ye-Fasoracetam uma unquma ukusebenzisa i-Fasoracetam. Kodwa-ke, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi imizimba yethu nobuchopho buhlukile futhi ngakho-ke, akukho siqinisekiso sokuthi ngeke usebenze noma yikuphi abanye abantu ababike ukuthi abazange babone imiphumela emibi yeFasoracetam. Ezinye ziyisenzo esivamile sokuzizwa kabi esingase sihambe isikhathi, kodwa uma siqhubeka, ungase ususe ukusetshenziswa kweFasoracetam.
Amathuba okubhekana nemiphumela emibi ye-Fasoracetam incike kwezinye izici, futhi indlela osebenzisa ngayo le nootropic inquma ubunzima. Ukwedlulela ngokweqile kungenye yezimbangela ezinkulu zemiphumela emibi. Ukuthatha ukwesekwa okuningi kakhulu kungandisa amathuba okuba nemiphumela emibi yeFasoracetam. Ukuze uthole imiphumela emihle nje kuphela, ukwaziswa ukuthi uthathe isilinganiso esanele seFasoracetam; uma kungenjalo, ungase uqede ukucindezela umzimba wakho nobuchopho ngakho kudala imiphumela engathandeki.
Nakhu eminye yemiphumela emibi yeFasoracetam ebikiwe;
Ukuhlupheka kokuphazanyiswa kwamathumbu, okungukuthi, isifo sohudo, ukuqothulwa, ukubhubhisa kanye nokucabangela isinye sezimo ezivame ukwedlula zonke abantu abaye bathi babhekene nazo. Ukukuvimbela ukuthi ungabhekene nalokhu, thatha isilinganiso esifanele futhi usebenzise i-Fasoracetam engcono kakhulu. Kodwa-ke, uma uqaphela ukuthi imiphumela emibi iyaba nzima, kufanele uxoxe nodokotela.
Ama-headaches ajwayelekile ne-nootropics yama-racetam ngoba iholela ekuqothulweni kwezinqolobane ze-choline ebuchosheni. Izinhlungu zingase zivame kodwa ukuqeda ikhanda, ungathatha Ipaki ye-Fasoracetam onomthombo we-choline, isib. i-Alpha GPC. Ukuthatha umthamo ongalungile kanye nemvamisa engavumelekile yokusetshenziswa kubonakaliswe nokuzwa ubuhlungu bekhanda, futhi kufanele, ke, uqiniseke ukuthi uthatha isilinganiso seFasoracetam esifanele. Uma unesifo sekhanda, cindezela ngoba kusiza ukusetha kabusha ubuchopho. Ungaphinde ukwandise inani lemanti oyithathayo.
Abanye abantu bangase bahlupheke futhi bangakwazi ukuhlela imicabango yabo ngokushesha ngemuva kokufaka i-Fasoracetam. Into enhle yukuthi umuzwa uyancipha emva kwesikhathi esithile.
Ukuba nomhlobiso ongenalutho kungenye yemiphumela abantu ababikile ukuthi bayabuhlungu ikakhulukazi ezimweni zokuqala ngemva kokuyisebenzisa. Bathi ukuthi ikhanda eliphansi liye laphela ngemuva kokusebenzisa isengezo izikhathi ezimbalwa.
Kwabanye, lesi sidakamizwa kuthiwa sithinte kabi impilo yabo yocansi ngokunciphisa i-libido nokunciphisa ama-orgasms abo. Ukusebenzisa izithako ezithuthukisa ezocansi kungasiza ekubhekaneni nomphumela weFasoracetam.
Uma usuthatha kakhulu ama-Fasoracetam, ungase uhlupheke ngokuntuleka kokulala. Yingakho ukwaziswa ukuthi uthathe isilinganiso esinconywayo njengoba kukusiza uthole ukulala komsindo.
Ukubuyekezwa kokubukwa kwe-6.Ukusebenza nokusetshenziswa kokusebenzisa iFasoracetam
Ngenkathi ungase ujabule ngokuqala umthamo wakho we-Fasoracetam, ungase ufune ukwazi uma usebenza kubantu abawusebenzise esikhathini esidlule. Kwabanye, bangase babe nokungabaza ngokusetshenziswa kwayo futhi bangathanda ukulalela indaba yomunye umuntu ukuze benze isinqumo esinolwazi. Ngeke nje kukusize ukuxazulula ingqondo yakho kuphela kodwa kukunika ithemba lokuthi i-Fasoracetam iyindlela yokuhamba.
Esikhathini esidlule, iFasoracetam isetshenziswe ngabantu abaningi ngokuphepha nangempumelelo, futhi iningi lalabo abalisebenzisile laba nesipiliyoni esihle lapho abaningi bechaza ukuthi izimpilo zabo zishintshe ngokuphawulekayo futhi bafisa ukuthi bazi le minyaka eyi-nootropi edlule. Nazi ezinye ze-Fasoracetam ukubuyekezwa esikutholile kumakhasimende ethu
U-Luli uthi "Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngangihlukunyezwa futhi lokho kwakuyisikhathi esicasulayo kakhulu empilweni yami. Ngavakashela odokotela, kodwa akekho nemithi eyanginikezwa ibonakala isebenza. Ngangikhathazekile kakhulu futhi ngangizibuza ukuthi yini engabangela lokhu. Ngingu-30 nje, futhi angikwazi ngisho nokukhumbula amagama omngani wami. Ngenhlanhla, umlingani wami emsebenzini wancoma ukuthi ngisebenzise i-Fasoracetam futhi kusukela ngifuna kakhulu ukusizwa, wangilalela ku-Phcoker.com ngosuku olufanayo. Kungakapheli amasonto amane, inkumbulo yami yayithuthukile kakhulu. Ngangijabule kakhulu futhi ngingeke ngimbonge umlingani wami nalesi sayithi esimnandi ngokwanele. Njengamanje, ngiyakhumbula cishe konke. Abangane bami bathi ngiyakhumbula izinto engingakaze ngitshele zona. Ngingasincoma i-Fasoracetam kunoma ubani ohlukunyezwayo inkumbulo. "
UJuan uthi, "Indodana yami ibilokhu iphathwa yi-ADHD, kanti udokotela wakhe wayembeke ngaphansi kwemithi eminingi. Bonke babemenza bamenze kabi, futhi lokhu kwangigcizelela. Ngangihlale ngichitha amahora amaningi ngenza ucwaningo ngalesi simo nokuthi singayilawula kanjani. Ngenhlanhla ngibone ukubuyekezwa okuhle kweFasoracetam okubambelele ukunakwa kwami. Ngiyalile, futhi yethu Ukwaziswa kwe-Fasoracetam bekulokhu kumnandi. Le mithi isize indodana yami esikoleni, futhi manje isingumfundi ongcono. Kwathatha amasonto amathathu ukuqala ukubona ezinye izinguquko kuye, futhi ngiyajabula ukuthi ngazi ngeFasoracetam. Uma ungase ube nenkinga efanayo, ngizokukhuthaza ukuba uzame. "
U-Bai uthi, "Angazi ukuthi kungani ukusebenza kabi nokuvilapha sekube yingxenye yami emsebenzini. Ngalahlekelwa ukugxila futhi ngigxila emva kwamahora ambalwa ekusebenzeni. Umphathi wami wayelokhu ekhononda, futhi kwakudingeka ngifune usizo. Ngemuva kokusebenzisa i-Fasoracetam isikhathi esithile, ngizizwa kahle. Ngizizwa nginamandla, ukugxila kwami ​​nokugxilisa ingqondo kubuyele emuva, futhi ngingasebenza usuku lonke ngingazizwa sengathi ubuchopho bami buyasebenza ngokweqile. Ingqondo yami icacile futhi manje ngiqedile imisebenzi eyabelwe ngaphakathi kwesikhathi esifushane. Ngiyazi ukuthi kubonakala kungokoqobo, kodwa wonke umuntu emsebenzini uyangibuza ukuthi ngikuphi. Angisabizi ithambo elivilapha njengoba belijwayele futhi manje bangikhethile njengomsebenzi omuhle emnyangweni wethu. Noma ubani osengabaza ngalesi sengezo, ngizokucela ukuthi ulungiselele Ukuthenga kwe-Fasoracetam ngoba kufaneleka wonke ama-dime ozowasebenzisa. "
Uthi Chen, "Ngisetshenziswe izikhathi ezimbalwa uFcoker.com, futhi kuzo zonke izikhathi, ngiye ngajabulela inkonzo enhle kakhulu. Yisayithi elilodwa kuphela elinokusekelwa kwamakhasimende okungcono kakhulu futhi inqubo yakhe yokuthenga ilungile. Angikaze ngibe nezinkinga nabo, futhi njalo ngithola iphakheji lami ngesikhathi. I-Phcoker iyigugu lezindawo ezicabangela amanani abo angabizi kakhulu kanye nekhwalithi enhle kakhulu. Ngihlale ngibethemba ngempilo yami, futhi nje ngiyalile ukuba iFasoracetam, futhi ngingaphezu kweqiniso lokuthi isipiliyoni sami seFasoracetam sizoba nesimo esihle. Ngizothumela isibuyekezo sami se-Fasoracetam lapha ngenyanga. Uma ukhathele ukuthenga izithako futhi ungatholi imali yakho, khona-ke i-Phcoker.com kufanele ibe isayithi oya kuyo. "
Uthi u-Fan uthi, "I-semester yokugcina nginovalo lokuthi ngingase ngiphumelele ukuhlolwa kwami ​​ngoba ngitholiwe ngine-amnesia emnene. Ngangizizwa ngicindezelekile ngoba ngangingeke ngicabange ngiphumele ngemva kokusebenza kanzima kulo lonke i-semester. Umfundi engifunda nabo wangifundisa kuFasoracetam, futhi angizange ngibheke emuva kusukela ngaleso sikhathi. Umsebenzi wami wengqondo uye wanda, futhi ngiyakhumbula cishe konke okufundiswa ekilasini. Ngivele ngithole imiphumela ye-semester yokugcina, futhi angikaze ngifeze kahle kusukela ngangijoyina isikole. Angiboni ubuchopho bobuchopho, futhi lokhu kwengezela sekuyintandokazi. Ukwaziswa kwami ​​kwe-Fasoracetam kuvele kuyinqaba! "
UJinhai uthi, "Umfowethu ubelokhu elwa nokucindezeleka nokukhathazeka, futhi muva nje waqala ukuzibulala. Sasisondeza ngokomzwelo njengomndeni ngoba akukho okubonakala sengathi kuphumelela. Zonke izindlela zokwelapha nezindlela zokubhekana nazo zazibonakala zingenhla kwemali. Eminye imithi yakhe yasebenza okwesikhashana abanye bamshiye ehlushwa izinkinga ze-thyroid. Kuze kube yilapho umngane wakhe owayehlupheke okufanayo wanikeza ukubuyekezwa okuhle kweFasoracetam. Kusukela ngaleso sikhathi izinto seziphendukile. Kuyinyanga nje kuphela lapho eqala ukuphuza imithi futhi kukhona umehluko omkhulu ekuhlaselweni kokukhathazeka. Uyavuma ukuthi akavamile ukugijima emicabangweni futhi ujabulele ukulala kwakhe. Kuze kube manje imikhuba yakhe ishintshile ibe ngcono, futhi singabonisa konke lokho kuFasoracetam. "
U-Jun uthi, "Ngemva kokuthenga i-Fasoracetam amasonto ambalwa adlule futhi ngiyithatha inkolo, ngiyajabula ukusho ukuthi kuye kwaba usizo olukhulu kimi. Ngiye ngajabulela ukuthuthuka okubonakalayo emzimbeni wami, futhi manje ngizizwa ngikhululekile kunalokho ngangivame ukuzwa ngaphambi kokuqala ukusetshenziswa kwayo. Amazinga ami wamandla asekhulile, futhi angisakwazi ukuvuka ngikhathele. Ngisho kangcono, manje ngiyakwazi ukufeza okuningi kwemisebenzi yami yansuku zonke ngaphandle kwesidingo sokuthatha amaphuphu. Ku-60, ngingaqiniseka ngithi angikaze ngizizwe lokhu okuhle empilweni yami. Ungakhohlwa ukuthi manje ngilale njengomntwana emva kokuthola usuku olukhiqizayo kakhulu. Ngokuqinisekile ngizoyincoma kunoma ubani odinga ukuthuthukiswa ezinhliziyweni zabo. "
Wonke umuntu ubheke phambili ekuhlakanipheni kunakho. Yize kungenjalo isikhathi eside, ukuzwa uhlakaniphile ngomzuzwana omfushane kungahamba phambili ekuthuthukiseni ukuzethemba kwakho. I-fasoracetam powder ayiyona ethandwa kuphela phakathi kwabafundi, kodwa nayo iyenzeka kubo bonke abantu abafuna ukuba nengqondo ekhaliphile engase iphumelele ngokugcwele. Futhi, wonke umuntu ofuna ukuhamba phambili kwabanye, agcina okuningi kwalokho abakufayo, futhi akhumbule konke okudingayo ukuze akhumbule angazuza kulokho okushiwo yi-nootropic. Ukwengeza kulokhu, iFasoracetam isebenza kahle ekusebenzelaneni nezinye izifo nemibandela esibhekene nayo ekuphileni kwethu kwansuku zonke.
Njengoba ukhumbule ukuthi i-Fasoracetam ayifaki noma iyiphi i-compound evamile emzimbeni wakho kunalokho inikeza i-choline eyisakhi esiyinhloko kakhulu esidinga umzimba wakho ukuze kukhuliswe ukukhiqizwa kwe-acetylcholine. Yisizathu esanele sokukholisa ukuthi lokhu kwengezela kusho okuhle komzimba wakho. Kodwa-ke, udinga ukuthola umdayisi othembekile oyokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yekhwalithi.
Ngezo zonke izinzuzo ezinikezwa yi-nootropic, ungafuna ukwazi ukuthi ungathenga i-Fasoracetam. Ngeshwa, abantu abaningi bafuna ukwenza imali elula kuwe, ngakho-ke kungenzeka ukuthi uthenge i-Fasoracetam engamanga, futhi lokho kungase kungakunikezi imiphumela oyifunayo. Ezinye kungenzeka zingenayo i-powder ye-Fasoracetam ngenkathi abanye bengenakho ukuhlushwa okulungile njengoba kumakwe kulebula. Lokho kusho ukuthi kuyoba yilapho kungcola imali futhi kungathinta ngisho nempilo yakho uma iqukethe imithi eyingozi. Ukuze uphephe, kufanele wazi umphakeli oya kuyo lapho ungathenga iFasoracetam online.
Ngakho-ke uma ufuna isayithi lapho ungathenga khona iFasoracetam online, ke Phcoker.com yindawo engcono kakhulu okumele ibe kuyo. Singesayithi elithembekile lokuthi ungenza lakho Ukuthengwa kwe-Fasoracetam futhi uthole ibanga eliphezulu kakhulu emakethe. Ngokungafani nezinye izingosi ezingase zikudonshe ngokuxuba i-powder yeFasoracetam enezibophezelo kanye nezigcwalisi, i-yethu yi-100% eyiqiniso.
Sizokunikeza nge-Fasoracetam ngentengo engabizi kakhulu emakethe ngaphandle kokuyekethisa ukusebenza kwayo kanye nekhwalithi. Esizeni sethu, sinikeza futhi ama-powders amaningi we-nootropic ukudayiswa ngamanani abungane. Ungase ulingeke ukuthenga amamaki angabizi kodwa njalo uqaphele ukuthi umkhiqizo oshibhile, unciphise amandla futhi uphakamise amathuba okungcola. Kukhethile ukukwenza utshalomali olufanele imali yakho. Sivumela njalo amakhasimende ethu imikhiqizo yekhwalithi, futhi ngemva kokusebenzisa imikhiqizo yethu, uzoqala ukuthola imiphumela ngaphakathi kwesikhathi esifushane kunokwenzeka. Enye inzuzo ezayo ngokuthenga imikhiqizo yethu ukuthi senza ukudiliva noma kuphi futhi ngesikhathi. Uma usulele nathi, ungaqiniseka ukuthi uzothola ipakethe yakho ngokuphepha esikhathini esincane sokuthumela. Uma unesithakazelo ekuthengeni ama-powders amaningi we-nootropic, ke sathola amadili angcono kakhulu kuwe.
Thenga i-Fasoracetam kusuka kithi namuhla futhi uthuthukise ikhono lakho lobuchopho lokufeza imisebenzi ngesikhathi esifushane futhi ngendlela engcono kakhulu.
Merchan, C., Morgan, R., Papadopoulos, J., & Fridman, D. (2016). Ukugqithiswa kwe-Phenibut ekuhlanganiseni neFasoracetam: Izidakamizwa eziphuthumayo zokuhlukunyezwa. I-Journal ye-Clinical Care Intensive and Medicine, 1, 001-004.
U-Elia, J., Ungal, G., Kao, C., Ambrosini, A., uJesu-Rosario, N., Larsen, L. ... & Sykes, B. (2018). I-fasoracetam ezinsheni ezinama-ADHD nezinhlobonhlobo ze-gene gutamatergic ziphazamisa ukusayina kwe-mGluR ye-neurotransmitter. Ukuxhumana koMvelo, i-9 (1), i-4.
UHarmsen, B., Robeyns, K., Wouters, J., & Leyssens, T. (2017). Ukufundwa kwamaFomu kaHulumeni aqinile aseFasoracetam: I-Anti-Alzheimer Pharmaceutical Potential. Umagazini wezesayensi yezokwelapha, i-106 (5), i-1317-1321.
Sarm RAD140 (Testolone) Umsebenzisi utshele: Ukubuyekeza, Sebenzisa izinyathelo, Izingozi
Amaphuzu Okuyinhloko we-6 ku-Melanotan-II / MT2 okudingeka ukwazi